Zimbabwe’s Catholic Bishops Accuse Government of Abuses - Word&Way
author: Fari Mutsaka, AP
HARARE, Zimbabwe (AP) — Zimbabwe is embroiled in an economic and political crisis marked by human rights abuses, said the country’s Roman Catholic bishops, who were then criticized by the government as “evil” and trying to promote genocide. In a pastoral letter read out at all Catholic churches Sunday, the bishops said Zimbabwe is in “a multi-layered crisis of the convergence of economic collapse, deepening poverty, food insecurity, corruption, and human rights abuses.”
“With nefarious cynicism to history, Archbishop Robert Christopher Ndlovu is inching to lead the Zimbabwe Catholic congregation into the darkest dungeons of Rwanda-type genocide,” Mutsvangwa said in the state-run Sunday Mail newspaper. The “errant” and “reckless” archbishop “and his flock of misled Catholic bishops” were promoting a civil war, she said, calling Ndlovu “the chief priest of the agenda of regime change that is the hallmark of the post-imperial major Western powers for the last two decades.”
Zimbabwe journalist Hopewell Chin’ono appears at the magistrates courts while handcuffed in Harare, July, 22, 2020. (Tsvangirayi Mukwazhi/Associated Press)
NOTE: Learn more about Zimbabwe and Christian work there in episode 56 of Word&Way’s award-winning podcast “Baptist Without An Adjective,” which featured an interview with Baptist peace activist Lance Muteyo.
White Support for Black Causes Doesn’t Last